XOG-Maxaa looga hadlayaa kulamada Rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
XOG-Maxaa looga hadlayaa kulamada Rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada.
June 26, 2021 Xuseen 1
Madaxda dawlad gobaleedyada & R/wasaaraha Soomaaliya kulanka uga furmayo Muqdisho Todobaadkan, waxaa hareyn doona xiisado siyaasadeed oo cusub, gaar ahaana qodobo kasoo laabtay heshiiskii 17kii September iyo Is afgaradkii u dambeeyey ee 27kii May, oo ay doonayaan in dib loo furo dawlad gobaleedyada qaarkood.
Dawlad gobaleedyada qaar kamid ah wey diideen in hadda xubnaha Guddiyadooda doorashada ay u diraan Muqdisho, iyagoo sugaya natiijada ka soo baxda kulanka 48saac ee nagu soo wajahan ka furmaya Muqdisho.
1- Igoobaha doorashada lagana dhigo caasumadaha dawlad gobaleedyada
2- In Ergada laga dhigo 51 qof, Horey u ahayd 101 qof.
3- Cida xulaysa ergadaas in ay noqoto dawlad gobaleedyada oo meesha laga saaro Odayaasha dhaqanka.
DIB KALA SOCO FAAHFAAHINTA…
Deni iyo madoobe balan iyo heshiis ma geli karaan lamana aamin karo.calaamddaha munaafiqiinta ayey leeyihiin. Wax mudda ka qabsaddana ma jiraan. Alle umaadda idin dhaafi.kooxda hotell jaziira iyaguna waa la mid. Alle ha dhaafiyo umaadda.